Soo ogow sida loogu qurxiyo gurigaaga qaabka loo yaqaan 'boho style' Bezzia
Susana Garcia | 26/04/2021 20:00 | Qurxinta, Isbeddellada qurxinta
La qaabab isku dhafan markaad qurxinayso Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aan sameyn karno, maxaa yeelay waxay na siineysaa xorriyad aad u badan markay tahay helitaanka qaybo iyo dhiirrigelin. Sidoo kale waa run in qaababku mararka qaarkood midoobaan oo ay adag tahay in la fahmo mid kale la'aantiis. Tusaale ahaan, qaabka guridda ayaa aad ugu dhex jira kuwa kale sida warshadaha ama boho chic. Xaaladdan oo kale, waxaan arki doonnaa sida loo qurxiyo qaabka loo yaqaan 'boho style'.
El qaabka boho-gurida wuxuu adeegsadaa soo jiidashada iyo sahlanaanta qaabka bohemia oo ay weheliyaan taabashada gaarka ah ee gogo 'guridda oo leh taariikh iyo dabeecad. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah iskudhafka aan aad u jecel nahay maxaa yeelay waxaan abuuri karnaa deegaanno leh dabeecad badan iyo qaab aan la barbardhigi karin
1 Midabada adduunka boho
2 Dhirtu waa lama huraan
3 Taabashada qalaad
4 Qaybaha guridda
5 Ha ku degdegin inaad qurxiso
Midabada adduunka boho
Waxaa laga yaabaa in waxa ugu adag ee la isku daro oo la isku daro qaabka qurxinta ee boho ay yihiin midabada, maaddaama uusan jirin hal isku darka oo keliya. Qaabka Nordic-ka waxaa loo isticmaalaa tonesyo badan oo aasaasi ah iyadoo macno ahaan ay taasi fududahay, laakiin adduunka boho muuqaal aan caadi ahayn ayaa lagu raadiyaa codad badanaa diirran. Way awoodaan qas codadka dhulka, casaanka qaar, bunniinka, liinta iyo xitaa buluug ama cagaar. Waxay kuxirantahay tirada midabada aan rabno inaan kudarno. Maaddaama ay jirto xorriyad badan, waxaan isticmaali karnaa tones aad u kala duwan oo aan kula raaxaysan karno. Dabcan, waa inaan ka cararno xad-dhaafka, maxaa yeelay haddii aan midab badan leenahay aakhirka waan daali karnaa. Isticmaal midab aasaasi ah sida beige iyo codad cad oo jaban oo dushooda ku dar dhar leh daabacyo iyo midabyo qurxoon.
Dhirtu waa lama huraan
Dhirtu waa wax weyn oo lagu daro qurxin kasta iyo guri kasta, laakiin qaabka loo yaqaan 'boho style' waxay had iyo jeer joogaan. Waxaad isticmaali kartaa noocyo kala duwan oo dheryo ah, qaarna leh qaab guridda ah, sida terra cotta, si aad isugu darto qaababka. Dhirta waaweyn ama cacti waa ku habboon yihiin. Waxa kale oo aad ku daldalan kartaa dhir qaar ka mid ah dheryaha dhejiska ah, kuwaas oo mar labaad mooday oo ku habboon in la isku daro qaababkan. Waad abuuri kartaa gees geedo ka buuxa.
In boho chic waxaan leenahay taabasho caadi ah laakiin sidoo kale waa a milicsiga qaab nololeedka Bohemian, taas oo safarka iyo dhaqamada qalaad ay boos ku leeyihiin. Taasi waa sababta munaasabado badan aan u arki karno qaybo ka yimid dhaqammo kale qaabkan. Haddii aad sidoo kale doorato wax guridda waxaad yeelan doontaa taabashada ugu fiican. Ha ka baqin inaad isku darto oo aad doorato qaybo aad jeceshahay, xitaa haddii ayan ahayn isbeddel, maxaa yeelay tani waa ruuxa qaabkan.
Waxaa jira fikrado badan oo kala geddisan oo ku saabsan qaabka guridda, laakiin wixii ka sarreeya dhammaan qaybaha dhabta ah iyo kuwa duugga ah ayaa la raadiyaa, kuwaas oo aan dib loo hagaajin ama aan ahayn nuqul ka mid ah wax duug ah. Tan waxaad ku raadin kartaa raadadka, maadaama iyaga dhexdooda aad ka heli karto runtii qaybo xiiso leh, oo leh taariikhdooda iyo shaqsiyad ahaanba. Doorashada qaybaha gaarka ah waa nooc ka mid ah qaabka boho, maaddaama aadan rabin inaad yeelato guri la mid ah kan dadka kale, oo ku saleysan isbeddellada, laakiin wax gaar ah oo ka duwan.
Ha ku degdegin inaad qurxiso
en el qaabka boho guridda qaybaha waa inay noqdaan kuwo gaar ah, sidaa darteed waxay u badan tahay inaynaan wax walba hal mar wada heli doonin. Waa muhiim in waqti la qaato si loo kala doorto qaybaha iyo faahfaahinta, iyadoo la raadinayo waxyaabo aan jecel nahay inaan ku abuurno jawiga gurigeenna ugu habboon. Mar alla markii aad heysato alaabta guriga, waxaad waqti ku qaadan kartaa raadinta faahfaahinta yar, laga bilaabo dhalooyinka ilaa dharka ilaa muraayadda. Ma jiro wax lagu degdego marka ay timaado helitaanka qaybo googo 'maxaa yeelay waxa aan dooneyno had iyo jeer uma muuqdaan marka hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Sida loogu qurxiyo qaabka boho-guridda
Suurtagal ma tahay in la ilaaliyo xiriir saaxiibtinimo oo aad la yeelato qofka aad is guursateen?